Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo sheegay in aysan jirin wax xurguf ah oo u dhaxeysa Kenya iyo Tanzania – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo sheegay in aysan jirin wax xurguf ah oo u dhaxeysa Kenya iyo Tanzania
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa manta oo sabti ah gaashaanka u daruuray warar ay mudooyinkaan isla dhex marayeen warbaahinta oo sheegayay in uu jiro isku dhac u dhexeeya dowladaha Kenya iyo Tanzania.
Kenyatta ayaa sheegay in xiriirka diplomaasiyadeed ee u dhexeeya labada waddan ee dariska ah uu yahay mid caadi ah, isla markaana aysan jirin wax xurguf ah oo uu ogyahay isaga.
Isagoo ka hadlayay munaasabad uu xariga uga jaray waaxdii labaad ee konteenarada lagu soo dajiyo oo laga sameeyay dekedda weyn ee magaalada Mombasa ayuu madaxweynaha meesha ka saaray in xitaa ay jirto cabasho ay kala qabaan labada dal.
Isagoo ka dhawaajiyay in uu maalmahaan aqrisanayay wararka been abuurka ah ee arrintaan la xiriira ayuu Uhuru Kenyatta ka dhawaajiyay in Kenya iyo Tanzania aysan marnaba kala maarmin ayna leeyihiin dano isku mid ah, kuwaasoo uu tusaale ahaan uga soo qaatay xiriirka dhinaca dhaqaalaha ee ay wadaagaan.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale uga digay warbaahinta in ay sii amba qaadaan faafinta wararka aan waxba ka jirin ee lagu sheegayo in ay isku dhacsanyihiin Kenya iyo Tanzania.
Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa hadalladooda ku saabsan arrintaas u cuskanayay mashaariic dhinaca dhooofinta badeecooyinka ah oo ay Kenya sameyneyso hadda, taasoo meesha ka saareysa wadadii hore oo mari jirtay Tanzania.
Sidoo kale waxaa si weyn loo hadal hayay in madaxweynaha tanzania John Magufuli uu ka baaqday ka qeyb galidda shirkii Africa iyo Japan ee TICAD, kaasoo dhawaan lagu soo gaba gabeeyay magaalada tan Nairobi, madaxwyneyaal fara badan oo African ahna ay ka qeyb galeen.
← Dadka waratada ee ku dhaqan xafada islii oo banaabax sameeyay
1 qof oo ku dhintay dab ka kacay guri ku yaalla Tharaka Nithi →